✔ 【Multi-Use】 Ibhotile yokugcwalisa enempilo kwaye inempazamo, ilungile ekhayeni, igumbi lokuhlambela, ikhitshi, iaromatherapy, uhambo. Fumana into enye engenanto kwiBhotile yaManzi onokuyisebenzisa ngotywala, ioyile eziyimfuneko, ubuhle, ukucoca, ukupheka kunye nokhathalelo lomntu.
Urse 【Mini Purse-ubungakanani】 Unokupakisha kuphela ezinye izixhobo zokuhamba zokutshiza kwimpahla yakho okanye esikhwameni sohambo lwakho nangohambo seshishini kunokuya kwibhotile enkulu yengubo yakho yentsimbi. Ubungakanani be-3.38oz / 100ml bungayithatha kwi-moya.
☂ 【Isparyer esiPhuculiweyo kunye noyilo lweLeakproof】 Isipreyi sethu sibonisa isitshizi seplastropylene ehlala ihleli.Iphepha elicacileyo leplastikhi linomtya kumlomo webhotile, ukuvalwa ngokuqinileyo nangokukhuselekileyo kungathintela ukuvela okungamanzi.
【I-Enviroment-friendly-】 Le bhotile yesaliti enokugcwaliseka iqulethe ubuthi obungenaziphumo zokuqinisekisa ukuba akukho bungozi bokungena kwimveliso yakho. Ibhotile nganye enempazamo ekupakishwe kuyo imveliso ihlala ixesha elide kwaye isebenza kwakhona. Khumbula ukuyicoca emva kwexesha lokuqala kwaye uyigcine kakuhle.
✎ 【Uluhlu lweepakeji with Iphakheji nganye inebhotile eyi-8 ye-spritzer kwaye nganye yayo inomthamo oyi-3.38oz / 100ml. Ungazisebenzisa kwiinjongo ezahlukeneyo.
Ubungakanani obuNcinci beMoto kunye neNqwelomoya-zasimahla
Unokupakisha kuphela ezinye izixhobo zokuhamba zokutshiza kwimpahla yakho okanye esikhwameni sohambo lwakho kunye nohambo loshishini kunokuba yibhotile enkulu yesikipa sakho. Ubungakanani be-3.38oz / 100ml bungayithatha kwi-moya.
Ibhotile yesitshizi esigqibeleleyo yokuhamba, ilula ngokufanelekileyo esikhwameni sakho okanye i-go-on, i-nozzle ilungile, ungakhathazeki malunga nokuvuza.
Umncedisi ogqibeleleyo wokuhamba: Iibhotile zethu zokuhamba ziluncedo kakhulu ekuhambeni. Ukuba uhamba rhoqo kwaye uthanda ukusebenzisa ishampoo yakho, i-conditioner kunye nomzimba okanye ubuso bokuhlamba okanye ezinye izinto zasimahla xa kunokwenzeka, iibhotile zobukhulu bokuhamba ziluncedo kuwe.
Edlulileyo: Iipakethi zeHenscoqi 8, I-Bottle ye-Henscoqi, i-3.38oz / 100ml, kunye ne-Miniml yokuThulula ibhotile engenanto, ubungakanani bokuhamba kwisitayile esineeMotile zeebhotile ezicacileyo zokuhamba kwi-oyile eyimfuneko, i-Perfume, i-M / U Remover
Okulandelayo: I-3pcs ijikeleze iglasi isitya esitsha esekwe ngesivalo, isitya sesaladi, isitya se microwave
Iglasi yeJar Cosmetic, Ibhotile ye-cosmetic, Iseti yeBhotile yeZithambiso, Iiglasi zeCosmetic zeGlasi kwiibhotile zeoyile, Iglasi yeBhotile yeZithambiso, Iglasi yezipho zeglasi,